Home » Lahatsoratra farany farany » Awards » Ilay mahery fo momba ny fizahantany farany dia mampirehareha an'i Senegal Proud
Birao fizahantany afrikanina • Awards • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Vaovao farany momba an'i Senegal • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • WTN
Ny World Hero Network dia natolotry ny World Tourism Network, tambajotran'ireo matihanina amin'ny fizahantany any amin'ny firenena 128. WTN dia nanomboka ny fanamboarana indray. Ny volana martsa 2020 tany Berlin, Alemana.
Ny loka dia tsy mifototra amin'ny saram-pisondrotana. Maimaimpoana hatrany izany ary tokony hahafantatra ny olona izay manohy ny dingana fanampiny hanasoavana ny tontolon'ny fizahantany manerantany, Dr. Deme Mou shy Faouzou dia iray amin'izy ireo, ary ny Hero Hero voalohany momba ny fizahantany avy any Afrika Andrefana.
Andriamatoa Deme Mouamed Faouzou no mpanolotsaina ao amin'ny minisiteran'ny fizahantany sy ny fitaterana an'habakabaka any Senegal, ary izao no farany Maherifo momba ny fizahantany avy amin'ny World Tourism Network.
Ny Hall of the International Tourism Heroes dia misokatra amin'ny alàlan'ny fanendrena ihany hahafantarana ireo izay naneho fahaiza-mitarika, fanavaozana ary fiasa miavaka. Mandeha ny dingana fanampiny ny Maherifo momba ny fizahantany. Tsy misy sarany isak'izay.
Hoy izy: Fantatro ny maha-zava-dehibe sy ny enta-mavesatra an'ity tombontsoa ity noho ny toetran'ny fizahan-tany manerantany ary tiako ny manome toky ny fanohanako amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny ezaka amin'ny habetsahana sy ny kalitaon'ny famelomana indray ny fizahantany afrikanina aorian'ny COVID-19.
Andriamatoa Deme Mouamed Faouzou dia natolotr'i Josef Kafunda any Namibia ankoatry ny hafa ho lasa Hero Heroista farany teo Tambajotra fizahan-tany manerantany.
Izy no tompondaka voalohany tany Senegal, faha-9 tany Afrika, ary faha-25 manerantany, ary ny mahery fo faha-4 amin'ity taona ity (2021) manerantany.
Hoy izy: Tohina aho, eny!
Tamin'ny tolo-kevitr'Andriamatoa Joseph Kafunda avy any Namibia, mpilalao sarimihetsika mahay sy matihanina amin'ny fizahan-tany no nanohana tamim-pitiavana ny mombamomba ahy tamin'ny fisafidianana ireo mpilatsaka hofidina ho Heroes momba ny fizahantany.
Avelao aho hanome voninahitra azy ary hisaotra ny komity mifantina izay notarihinao satria nandalina sy nanaiky hanome ahy ny mari-boninahitra Hero of Tourism.
Ity fanendrena ity dia herintaona monja taorian'ny nanaovan'ny komity mpanatanteraky ny fizahantany afrikanina ahy ny fiakarana ho ambaratonga ambasadaoro misahana ny fizahantany afrikanina.
Ireny fanamasinana ireny, sahy hoy isika, dia vokatry ny traikefa nandritra ny 30 taona sy ny asa mafy mba hanomezana anjara birikintsika amin'ny fampandrosoana ny fizahantany afrikanina, manerantany ary indrindra fa an'i Senegal, tanindrazako izay nanome ahy ny zava-drehetra.
Nomena ahy ny voninahitra tamin'ity herinandro ity mba nofidian'ny komitin'ny Pyne Awards 2021 hanolotra ny mpanatrika ny mpandresy ny orinasa afrikanina tsara indrindra mandritra ny lanonana ofisialy eo imason'ny Minisitra sy ny Ambasadaoro ary ny Diaspora.
Fantatro ny maha-zava-dehibe sy ny enta-mavesatra an'ity tombontsoa ity noho ny toetran'ny fizahan-tany maneran-tany ary tiako ny manome toky ny fanohanako amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny ezaka amin'ny habetsahana sy ny kalitaon'ny fifohazana ny fizahantany afrikanina taorian'ny Covid 19
Andriamatoa Deme Mouamed Faouzou
Maherifo momba ny fizahantany any Dakar, Senegal
Andriamatoa Deme Mouigned Faouzou dia nanampy betsaka tamin'ny resaka Investment Investment any Senegal sy ny sisa.
Izy no mpanolotsaina ny Ministeran'ny fizahantany sy fitaterana an'habakabaka any Senegal.
Fantatra izy miteny tsy amin-tahotra raha momba ny fizahan-tany sy ny fomba tokony hiasa ny fizahan-tany.
Manam-pahaizana amin'ny sehatry ny fizahan-tany, fandraisam-bahiny ary sehatry ny fiaramanidina sivily izy. Ny zavatra niainany na amin'ny sehatra tsy miankina na amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana dia zavatra tsy hitantsika amin'ny mpitondra maro
Tena liana amin'ny fizahan-tany izy, ny fampandrosoana ary manana faniriana mafy ny hiady amin'ny firenena tsy mandroso mba hahazo fidiram-bola amin'ny alàlan'ny fizahan-tany,
Izy dia olona maneho ny soatoavin'ny fanajana, fizarana, firaisankina ary ny fitsipiky ny 'fisokafana sy ny famoronana harena.
Andriamatoa Faouzou dia mpikambana ao amin'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany.
Hoy izy eTurboNews:
Hoy Andriamatoa Faouou:
Izaho dia mpilalao matihanina izay nahazo diplaoma tamin'ny fizahantany, fandraisana vahiny, ary sehatra sivily sivily, manana traikefa an-taonany maro na amin'ny sehatra tsy miankina na amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana.
Liana amin'ny fizahan-tany aho, tiako ny fivoarany ary tena maniry mafy hahita ny fahazoan'ny firenena tsy mandroso fivoarana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany aho, izay misy ny soatoavin'ny fanajana, ny fizarana, ny firaisankina ary ny fitsipiky ny 'fisokafana sy ny famoronana harena. .
Mpampianatra ao amin'ny Mpanolo-tsaina Teknika momba ny fizahantany ao amin'ny Oniversite an'ny minisitry ny fizahantany sy ny fitaterana an'habakabaka any Senegal aho.
Tale misahana ny fizahan-tany aho, mpitantana hotely, mpandahateny, mpanazatra, Mpanolo-tsaina Senior, ary filohan'ny National Observatory for the Development of Tourism in Senegal
Mpikambana sy solontena ho an'i Senegal ao amin'ny Association of Professional Africaity Hospitality (AAHP) aho, solontenan'ny Komitin'ny fizahantany afrikanina miteny afrika miteny frantsay.
Ambasadaoro ho an'ny Birao fizahantany afrikanina.
Izaho koa dia mpanoratra ny boky maromaro, ao anatin'izany ny dia fizahan-tany sy fizahan-tany Senegaly.
Izaho dia kandidà ho an'ny sekretera jeneralin'ny World Tourism Organization - UNWTO.
Nahazo ny Knight of the National Order of Merit of the Republic of Senegal 2017 aho.
Andriamatoa Faouzou dia ao amin'ny orinasa. Mihaona Heroes fizahantany 16 eto.
Ny filohan'ny WTN Juergen Steinmetz dia nilaza hoe:
“Tena reharehantsika ny manome voninahitra an'i Deme Mouigned ho tonga Hero Hero voalohany amin'ny fizahantany any Afrika Andrefana. Niasa tsy an-kijanona tamin'ny fanomezana fankasitrahana ho an'ny fireneny Senegaly izy eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany mandalo izao krizy izao. Mila ny olona amin'ny fahitany, ny heriny ary ny fitaomany hitarika. Miarahaba anao! ”
Diana McIntyre-Pike hoy:
24 Aogositra 2021 amin'ny 07:26
Miarahaba anao Deme Mohamed tamin'ny fidirana amin'ny fianakavianay WTN International Tourism Heroes Award izay nahazoako voninahitra ny ho tafiditra ao amin'ny 2020 ary manantena ny hifandray aminao tsy ho ela